Ukubhaliswa Kwegeyimu Yevidiyo Ethobekile Kuzokwehlisa Ukusekelwa Kwe-Mac | ngivela ku-mac
Ukubhaliswa Kwegeyimu Yevidiyo Ethobekile Kuzokwehlisa Ukusekelwa Kwe-Mac
U-Ignacio Sala | | I-Mac OS X, Izaziso
I-Humble ingenye yezinkundla ezimbalwa ezitholakalayo ze-Mac enikeza insizakalo yokubhaliselwe yanyanga zonke ngokushintshanisa ukufinyelela kwinani elikhulu lemidlalo yevidiyo, inkundla etholakalayo kukho kokubili iWindows neLinux.
Kodwa-ke, njengoba inkampani imemezele nge-imeyili ukuthi isithumele kuwo wonke amakhasimende ayo, kusukela ngoJanuwari 1, izokwethula uhlobo olusha lwebhizinisi oludinga isicelo esisha, isicelo esisha Izotholakala kuphela ku-Windows.
Ngale ndlela, izolahla ukusekelwa kwakho kokubili i-Linux ne-macOS. I-Humble Choice inika ababhalisile ukufinyelela kumidlalo ekhethiwe engu-10 abangayigcina phakade.
Kuze kube manje, le nkundla inikeze izinhlelo ezihlukene zokubhaliselwe. Nokho, kusukela ngo-February 1, izokwehlisa zonke izinhlelo zibe munye futhi izotholakala kuphela ku-Windows, ucezu lwezindaba olulimaza kuphela ubudlelwano phakathi kwe-macOS nemidlalo.
Ngokwalokho esingakufunda ku-imeyili ukuthi ithunyelwe kubo bonke abasebenzisi bale nkundla, nge Neowin:
Sifuna ukukwazisa ukuthi kusukela ngo-February 1, izinguqulo ze-Mac ne-Linux zemidlalo yamahhala ye-DRM okwamanje eku-Humble Trove ngeke zisatholakala.
Njengelungu le-Humble Choice, usengakwazi ukuzilanda ukuze uzigcinele iqoqo lakho siqu kuze kube nguJanuwari 31. Bazoqhubeka nokutholakala ngaphakathi kohlelo lokusebenza olusha lwe-Humble kulabo abasebenzisa iWindows.
Yonke imidlalo esatshalaliswe kule nkundla ngokusebenzisa ezinye izinkundla, kungaba i-Origin noma i-Steam, ngeke ithintwe yilesi silinganiso esisha.
Abasebenzisi ababenethemba lokuthi lesi sigcawu samukelwe ngezandla ezimhlophe inombolo enkulu yezihloko ngokwethulwa kwe-Apple Silicon, isivele ikhohliwe.
Njengoba umthuthukisi uSteve Troughton ethi:
Ukwehla nokugeleza kwe-ecosystem yokudlala ye-Mac kuyadabukisa kakhulu ukukubona. U-Apple ushise amabhuloho amaningi nge-hack ye-32-bit, ukushabalala kokusekelwa kwe-OpenGL, kanye nokuqinisekiswa okuphoqelekile. Ingasaphathwa eyeminyaka yokusebenza kwe-GPU ngamanani entengo.
Ukuthembela kumidlalo ye-iOS akwenzi lutho ukumisa lo mkhuba osabalele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Ukubhaliswa Kwegeyimu Yevidiyo Ethobekile Kuzokwehlisa Ukusekelwa Kwe-Mac
U-Apple uzovala iluphu ku-Apple Silicon ekupheleni kwalo nyaka
UGurman uthi i-Apple isebenze ku-HomePod esebenza ngebhethri